Madaxweyne Donald Trump oo u hanjabay Dowladda Ciraaq - BBC News Somali
Image caption Barlamaanka Ciraaq ayaa meelmariyay qaraar ka dhan ah Mareykanka
Donald Trump ayaa sheegay in saldhigga cirka ee uu Mareykanka ku leeyahay Ciraaq ay ku baxday balaayiin doolar, ciidamada Mareykakana aysan ka bixi doonin dalkaas ilaa iyo inta mas'uuliyiinta dalkaas ay ka bixinayaan kharashka Mareykanka uga baxay dhismaha saldhigaas.
"Dowladda waxaa ka go'an in ay ka laabato codsi taageero oo ay weydiisatay isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalamaya kooxda Daacish, maadaama uu dhamaaday hawgalka milateri ee gudaha Ciraaq, lagana adkaaday kooxda ISIS," ayaa lagu yiri qaraarka.
"Dowladda Ciraaq waa in ay si khasab ah uga shaqeysaa soo afjaridda joogitaanka ciidamada ajnabiga ah ee jooga dalka Ciraaq, lagana mamnuucaa in ay adeegsadaan hawada, dhulka iyo biyaha dalka Ciraaq,", ayaa la raaciyay.
Image caption Qasem ayaa waxaa dilay Mareykanka
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq, Adel Abdul Mahdi ayaa kahor meel marinta qaraarka waxaa uu barlamaanka dalkaas ugu baaqay in ay soo afjaraan joogitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan Ciraaq.
"Inkastoo aan wajihi doonaa culeys dhanka dibadda iyo gudaha dalka, haddana arrintan waxay dan ugu jirtaa dalka Ciraaq," ayuu yiri Abdul Mahdi oo la hadlayay barlamaanka kahor codeynta.
Image caption Kumanaan u baroordiiqaya Qasem
"Abdul Mahdi uma bannaaneyn waxkale oo aan ka ahayn in go'aan adag uu ka qaato joogitaanka ciidamada Mareykanka ee jooga gudaha Ciraaq,"ayuu yiri.